6 Jizọs weere ikwusa ozi ọma ka ọrụ kacha mkpa. (Gụọ Luk 4:43.) Ozi ọma o kwusara mere ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị na-eso ụzọ ya. Ma, ọ ma na ọrụ a ka ga-arụ buru ibu nakwa na ọtụtụ ndị ga-anabata ozi ọma. Ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya: “Welienụ anya unu lee ubi, na ihe a kụrụ na ha achaala maka owuwe ihe ubi.” (Jọn 4:35-38) Ọ na-ekwu banyere ịchịkọta ọtụtụ ndị ọzọ ga-abụ ndị na-eso ụzọ ya. Ọ bụrụ na ihe a kụrụ n’ubi achaa, ezigbo onye ọrụ ubi agaghị ahapụ ya ka ọ laa n’iyi. Jizọs mere ka ezigbo onye ọrụ ubi. Tupu ya alaghachi eluigwe, o nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu, sị: “Gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m.” (Mat. 28:18-20) Otú ahụ ka Jizọs si nye ha akụ̀ bara ezigbo uru, ya bụ, ikwusa ozi ọma.—2 Kọr. 4:7.
7 Gịnịzi ka anyị ga-aghọta n’ihe a? Ebe ọ bụ na Jizọs nyere ndịozi ya ọrụ ime ka ndị mmadụ bụrụ ndị na-eso ụzọ ya, e nwere ike ikwu na ihe o mere mgbe ahụ bụ inyefe ha “ihe ndị o nwere,” ya bụ, talent ya. (Mat. 25:14) N’ihi ya, talent ndị ahụ bụ ọrụ o nyere ha, nke bụ́ ikwusa ozi ọma na ime ka ndị mmadụ bụrụ ndị na-eso ụzọ ya.